ကြော်ငြာကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 5
Meeting Invitation for R I T 93 Friends Gathering (Dec 7th 2014) (မိုးမခရွာဆော်ကြီး) ဒီဇင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၄ No tags...
ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် မြန်မာကျောင်းသားအသင်းက “ဒါဒို့မြေ” ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ပြသမည်
ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် မြန်မာကျောင်းသားအသင်းက “ဒါဒို့မြေ” ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် ပြသမည် (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ညနေ ရ နာရီ။ နေရာ – 200S Faywather...
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာရောက် ရွှေည၀ါဆရာတော်၏ တရားပွဲ အောက်တိုဘာ ၁၁ မှာ ကျင်းပမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ အောက်တိုဘာ ၈၊ ၂၀၁၄ Tags: ဆန်ဖရန် Related posts နွယ်ခွေ...
ဓမ္မဒဿီ က္ကစ္ဆာသယ သဲပုံစေတီတော် ပွဲတော် ကျင်းပမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ စက်တင်ဘာ ၃၊ ၂၀၁၄ အမေရိကန် နိုင်ငံ ၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ် ၊ အမာရီလိုမြို့ ၊ဇေယျသုခ ဓမ္မရိပ်သာ ကျောင်းတိုက်အတွင်း...
ဆိုင်စံ (သမီး စိုင်းထီးဆိုင်) ၏ တကိုယ်တော် အခွေ မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၈၊ ၂၀၁၄ စိုင်းထီးဆိုင် ၏ သမီးလတ် နန်းစံဟွမ်၊ အနုပညာ အမည် ဆိုင်စံ တကိုယ်တော် တေးစု...
ဘတ်ဖဲလိုးမြို့နေ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများအတွက် Burmese Community Services, Inc. မိုးမခ၊ သြဂုတ် ၁၄၊ ၂၀၁၄ လက်ခံရရှိသော သတင်းများအရ အောက်ဖော်ပြပါ အသင်းအဖွဲ့အကြောင်းကို မျှဝေလိုက်ပါသည်။ Burmese Community...
အဓိဌာန်ဆရာတော်၏ မွေးနေ့ပူဇာမင်္ဂလာအခမ်းအနား ဖိတ်ကြားစာ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇူလိုင် ၂၉ ၊ ၂၀၁၄ No tags for this post. Related posts No related posts.
မေတ္တာနန္ဒ ကျောင်း ၊ ၀ါဆိုပွဲ၊ ဇူလိုင် ၁၃၊ ၂၀၁၄ (ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ) မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇူလိုင် ၁၀၊ ၂၀၁၄ Tags: ဆန်ဖရန် Related posts နွယ်ခွေ – မေတ္တာနန္ဒစာသင်ကျောင်းက...
မိုးမခရဲ့ ဆောင်းပါးရှင် ဆရာတော်၏မွေးနေ့ အမာရီလိုမြို့က ဖိတ်စာ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇူလိုင် ၃၊ ၂၀၁၄ No tags for this post. Related posts...
ခေတ်ပြတိုက်က နွေတညကို မိတ်ဆက်မည် ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၄ No tags for this post. Related posts No related posts.
မုဒိတာရွှေကျောင်း ဟေးဝဒ်၊ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ၊ ဇွန် ၂၉၊ ၀ါဆိုပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇွန် ၂၅၊ ၂၀၁၄ Tags: ဆန်ဖရန် Related posts နွယ်ခွေ...
နယူးယောက်မြန်မာများက သန္တိသုခအကြမ်းဖက် စီးနင်းမှုကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမည် မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇွန် ၁၈၊ ၂၀၁၄ မဟာသန္တိသုခကျောင်းဝင်းအတွင်း လက်နက်ကိုင်ဝင်ရောက်လျက် ကျောင်းတိုက်ကိုချိပ်ပိတ်ခြင်း၊ သံဃာတော်များကိုဖမ်းဆီး ၊လူဝတ်လဲ၊ ထောင်ချခြင်းများကိုဆန့်ကျင် ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးခံသံဃာတော်များအမြန်လွှတ် ပေးရေးတောင်းဆိုကြောင်း ဆန္ဒပြပွဲ နေ့စွဲ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၉ နှစ်မွေးနေ့အတွက် ပန်းချီကား ၆၉ ပြပွဲ (For SUU) မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၁၄ ဇွန် ၁၉ မှာ အသက် ၆၉...
ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာမှာ Burma House စားသောက်ဆိုင် ဖွင့်ပြီ မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇွန် ၁၄၊ ၂၀၁၄ မြန်မာများစုဝေးရာ ဖရီးမောင့်မြို့နဲ့ ဆီလွန်ကွန်တောင်ကြား အနီးက ဒေါက်တာမောင်မောင်သော် သွားဆေးခန်းနဲ့ ကပ်လျက်...
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ မိုးမခ မေ ၂၉၊ ၂၀၁၄ မကြာသေးမီကမှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လစဉ်ထုတ်ဝေနေပြီဖြစ်တဲ့ မိုးမခမဂ္ဂဇင်းရဲ့ စာနယ်ဇင်းမိတ်ဆက်ပွဲ နဲ့ စာပေဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ...